एकपटक विदेशमा स्टेज प्रोग्राम गरेको ७ लाख कमाउने मोडल रन्जिता लिम्बुको मासिक खर्च ५ हजार मात्र ! [हेर्नुस भिडियो साहित्] - Enepalese.com
एकपटक विदेशमा स्टेज प्रोग्राम गरेको ७ लाख कमाउने मोडल रन्जिता लिम्बुको मासिक खर्च ५ हजार मात्र ! [हेर्नुस भिडियो साहित्]
इनेप्लिज २०७४ फागुन २७ गते १३:०३ मा प्रकाशित
पिएनपिखबर, भक्तपुर : मोडल रंजिता लिम्बु पछिल्लो चरणमा निकै व्यस्त मोडलको रुपमा चिनिन्छिन्। उनको अभिनय निकै जिवन्त र वास्तविकतासँग प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ। मोडल रंजिताको जतिपनि म्युजिक भिडियोहरु बजारमा आएका छन् सबैलाई दर्शक स्रोताहरुले अत्यधिक रुचाएका छन्। उनी सरल स्वभावकी हसिली खुसिली र मिलनसार छिन् ।
पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्ला तप्लेजुङमा जन्मिएको भएता पनि संघर्षको पहाडहरुलाई छिचोल्दै सांगीतिक आकाशकी एक उदाउँदो ताराको रुपमा अघि बढ्दै छिन्। उनले हालसम्म ३ दर्जन म्युजिक भिडियोमा मोड्लिंग गरिसकेकी छिन् । उनी भन्छिन, ”आजसम्म ब्वायफ्रेन्ड नै बनाएको छैन, ब्याईफ्रेन्ड भनेको भार हो, त्यो म बोक्न चाहन्न ।”